Gudoomiyaha Barlamaanka oo sheegey in loo baahan yahay in la difaaco Qaranimada Dalka – idalenews.com
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa shaaca ka qaaday in dawlada ay u taallo difaaca qaranimada iyo madax bannaanida dalka isagoo dhanka kalana ka hadlay xaalada magaalada Kismaayo.
Prof Jawaari oo si hordhac ah baarlamaanka uga waramay kulanka berito la isu diyaarinayo ee lagu wado in xukuumadda cusub kalsoonida ku weydiisato baarlamaanka, ayaa sheegay in dawlada looga baahan yahay inay ilaaliso qaranimada wadanka.
“Waa waajib in wixii dhaawacaya qaranimada iyo madax bannaanida laga hortago oo la difaaco qaranimada Soomaaliyeed…” ayuu yiri afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya.
Prof Jawaari oo ka hadlay wararka sheegaya in wafdi dawladu u dirtay magaalada Kismaayo ay soo celiyeen ururka Raskambooni ee uu hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe ayaa wuxuu sheegay in baarlamaanka uu ka rabo madaxweynaha dawlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu baarlamaanka hor yimaado si loo weydiiyo xaalada Kismaayo iyo wafdiga laga soo celiyey halkaasi maalintii Arbacadii. [HALKAN KA AKHRI XUBNAHA WAFDIGA IYO UJEEDADIISA]
Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya oo Idale News maanta la hadashay ayaa sheegay inay aad uga niyad jabsan yihiin wararka sheegaya in ciidamada Kenya aysan ka amar qaadin taliska AMISOM halka ciidamada Raskambooni ay hadda u muuqdaan maleeshiyo aan ku hoos jirin taliska dawlada Muqdisho, taasina ay dhibaato ku tahay sugida amaanka dalka. [DAAWO SAWIRO CIIDAMADA RASKAMBOONI]
“.. Waad la socotay in Arbacadii markii wafdigii uu madaxweynuhu diray la soo ceyriyey inuu madaxweynuhu u yeeray taliyaha guud ee AMISOM uuna weydiiyey in taliyaha ciidamada Kenya ee jooga Kismaayo uu tafaasiil ka bixiyo sababta ishortaaga loogu sameeyay wafdiga, taliyuhuna waxaa uu cadeeyay in ciidamada Kenya ee meesha [Kismaayo] jooga aaney amar ka qaadanin” sidaasi waxaa Idale News maanta u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada oo aan rabin in warbixintan magaciisa loo adeegsado.
Mudanayaasha baarlamaanka laftooda ayaa ku kala aragti duwan sida loo wajahayo arimaha Kismaayo, walow ay hadda jirto aragti ah inaan la ogolaan karin hab isbabaryaac ah oo ka soo cusboonaada gobolada dalka ee laga saaray Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in warar ka soo gaaray Kismaayo ay sheegayaan in dhuxul fara badan laga dhoofinayo dekeda Kismaayo.
Dhanka kale, ilo wareed ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa Idale News u xaqiijiyey in madaxweyne Xasan Sheekh uu ashtako rasmi ah u diray sarkaalka ugu sareeya Midowga Afrika Aboubacar Diyara isagoo weydiistay in Midowga Afrika uu jawaab ka soo bixiyo awooda ciidanka Kenya iyo cida ay kaga amarqaataan hawlgalka Soomaaliya. Mr Diyara oo isaga laftiisa bisha Febraayo ee soo socota ay kaga eg tahay xilka uu ka hayo xafiiska Midowga Afrika, ayaa laga filayaa inuu Muqdisho soo gaaro usbuuca berito bilaabanaya uuna la kulmo madaxweynaha.
Dwladu waxay ku eedeysay ciidamada Kenya inay arimaha gobolada Jubbooyinka kala xiriiraan cid aan dawlada ka amarqaadanin isla markaana Kismaayo ay ka dhigayaan meel ay jabhado ka taliyaan.
Watch: Deputy Speaker of Kenyan Parliament Mr. Farah Macalin: “Somali government and the president Hassan should respect and read the constitution of Somalia “